Deg-deg:- Dagaal xoogan oo caawa ka qarxay magaalada Laascaanood iyo Askari la xaqiijiyay in lagu dilay.
May 16, 2019 Xafiiska Puntland 7
Wararka haatan kusoo dhacaya warqabadka Marqaannews ayaa waxay sheegayaan in caawa dagaal xoogan uu si lama filaan ah uga qarxay gudaha magaalada Laascaanood. Dagaalka ayaa sida wararka Marqaannews heleyso sheegayaan inuu udhaxeeyo ciidamo kawada tirsan
Daawo:- Jabhadda SSC oo ku dhawaaqday dagaalkii ugu dambeeyay “inta Jeegaantu taako dhulkayaga ah haysato Qoriga dhigi mayno”.
April 10, 2019 Xafiiska Puntland 0
Madaxa jabhadda dib u xoraynta Khaatumo Col. Faysal Falaalug oo xalay wareysi gaar ah siiyay Channel-ka lagu magacaabo Buuhoodle News ayaa ka warbixiyay weerar ay jabhaddiisu laba habeen ka hor ku qaadday ciidamada Somaliland ee
Degdeg:- Ciidanka Somaliland oo Gadooday iyo Jabhadda SSC oo si buuxda ula wareegtay Tukarraq “Calanka SSC oo sudhan Badhtanka magaalada”.
April 9, 2019 Xafiiska Puntland 7
Wararka ka imaanaya Deegaanka Tukarraq ee Gobolka Sool ayaa waxay sheegayaan in ciidamo katirsan kuwa Somaliland ay faarujiyeen deegaanka isla markaana ay ubaxeen caro ka dhalatay jabkii kasoo gaaray dagaalkii ugu dambeeyay ee ka dhacay
Jabhadda SSC oo guulo waawayn ka gaadhay Dagaalkii ka dhacay duleedka Deegaanka Tukarraq + Maleeeshiyaad sii qulqulaya.
April 9, 2019 Xafiiska Puntland 10
Ciidamada jabhada xoraynta degaanada SSC ayaa Habeen kahor weerar abaabulan oo si wayn looga soo shaqeeyay ku qaaday fadhiisimada Malayshiyada Somaliland ay ku leeyihiin aaga Tukaraq. Dagaalka oo mudo socday ayay khasaare Laxaad Leh loogu
Dhagayso Waraysi:- Sargaal kasoo jeeda Sool oo MD Deni ku dhiirageliyay inuu iclaamiyo dagaal ka dhan ah Sland.
March 28, 2019 Xafiiska Puntland 11
C/risaaq Aadan Maxamed Ganey oo ah taliye ku xigeenkii hore ee ciidamada Asluubta Puntland ee gobolka Sool ayaa ugu baaqay madaxda dowladda Puntland iyo shacabkaba in ay kawada shaqeeyaan adkaynta midnimada Puntland iyo sidii hal
DAAWO VIDEO ARIN NAXDIN LEH:Gabadh Aroos Ah oo Ninkeeda Muqdisho Lagu Hor Diley Kana Hadlaysa.
March 19, 2019 marqaan 0
Magaalada Muqdisho waxaa Lagu Diley Wiil Aroos Ahaa 4 Bari oo kaliya,Isagoo Gurigiisa Sii galaya Ayaa Ciidamada Dowlada Ku Toogteen Guriigiisa Hortiisa,Xaaska Ninkaasi Arooska Ahayd Ayaa Ka Hadashay Dhacdaadani . Waxayna Ka Codsatay Dowlada In
Dhagayso Waraysi Gaar ah:- Gudoomiyihii hore ee gobolka Sool ee Puntland oo gaadhay Laascaanood + Ujeedka socdaalkiisa ‘Waxaan ahay shacab”.
March 19, 2019 Xafiiska Puntland 0
Gudoomiyihii hore ee gobolka Sool ee Puntland Abukar C/raxmaan Gelle oo iska casilay xilkii gudoomiyaha gobolka Sool 31-kii bishii December ee sanadkii hore ee 2018 ayaa maanta gaadhay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. Mr.
Xukumada Cusub ee Puntland ee Soo Celinta Sool Laga Filayey oo Durba Soomaliland Dhul Ka Qabsatay Kuna Hanjabaya Garoowe.
March 18, 2019 marqaan 3
Iyadoo Xukumada Cuusb ee Puntland ee uu Hogaaminayo Madaxweyne Siciid cabdulahi Deni laga Filayey Inay Soo Celiso Gobolka Sool Sida Balanta Ololahiisaba Ugu Weynayd Durba Waxaa muuqanaya Inay Ciidamadii Jiida Iskaga Baxeen,Halka Soomaliland Gobolka Sanaag
DEG DEG:- Xiisadda kataagan magaalada Laascaanood oo siii korodhay iyo Somaliland dhinac noqotay.
March 17, 2019 Xafiiska Puntland 3
Wararka kusoo dhacaya warqabadka Marqaannews ayaa waxay sheegayaan in wali magaalada Laascaanood gaar ahaan duleedka magaaladaasi ay kataagan xisaad dagaal oo baaxad leh. Wararka ayaa waxay sheegayaan in xiisaddaan ay udhaxeyso Maleeshiyaad Hubaysan oo ku
Daawo:- Coll.Caare oo kasoo hadlay Garoowe “Ninka ileh caare baan raadinayaa sow ma ahan kii aan maxbuus ahaanta uqabatay”.
March 13, 2019 Xafiiska Puntland 9
Hogaamiyaha jabhadda dulmi diidka Somaliland General siciid cawil jaamac caare iyo Samadaan Yoonis Siciid Cilmi oo goor dhoweyd shirjara,id ku qabtey xaruntooda ayaa waxa uu hanjabaad u diray ganral caare maaamulka somaliland oo beryihii ugu
Dhagayso:- Eedeyn kadhan Axmed Karaash oo kasoo yeertay gobolka Sool + Jawaab laga bixiyay.
March 13, 2019 Xafiiska Puntland 0
Gudoomiyaha degmada Faliidh Yaale ee gobolka Sool Saleebaan Faarax Gurxan ayaa ka jawaabay eedaymo loo jeediyey madaxweyne ku xigeenka Puntland Axmed Cilmi Cismaan (Axmed Karaash), kuwaas oo kasoo yeedhay masuuliyiin ka tirsan maamulka degmada Boocame
Dhagayso:- Munaasabad lagu taageereyay Axmed Karaash iyo Degmo cusub oo ka dhacday Gobolka Sool.
March 9, 2019 Xafiiska Puntland 0
Munaasibad lagu soo dhowaynayey madaxweynaha dowladda Puntland Saciid Cabdullahi iyo ku xigeenkiisa Axmed Cilmi Cismaan (Axmed Karaash) iyo magacaabista degmada Faliidh Yaale ee gobolka Sool oo uu kusii shaqayn doono maamulka gobolka Sool iyo Kastankuba
Dhagayso Waraysi:- Maamulka degmada Boocame oo cabasho ka muujiyey qorshaha Axmed Karaash ee gobolka Sool.
March 7, 2019 Xafiiska Puntland 0
Gudoomiye ku xigeenka degmada Boocame ee gobolka Sool Axmed Cismaan Karaaf ayaa cabasho ka muujiyey wareegto kasoo baxday xafiiska madaxweyne ku xigeenka PL Axmed Cilmi Cismaan (Axmed Karaash), taas oo ahayd in maamulka gobolka Sool
Dhagayso:- Masuuliyiin ka tirsan wasaarada amniga Puntland oo gaaray deegano ka tirsan gobolka sool
March 5, 2019 Xafiiska Puntland 1
Wasiir Kuxigeenka Wasaarada Amniga puntland Yuusuf Maxamed Ismail shirta iyo wafdi balaaran uu hogaaminayay ayaa maanta kormeer ku sameeyay saldhiga booliska degmada boocame,isagoona sidoo kale intii uu kusugnaa Degmada boocame uu kulamo kala duwan la
Daawo:- Somaliland oo kahadashay dagaalkii shalay kadhacay gobolka Sool “Deni daandaansi buu wali nagu wadaa”.
March 5, 2019 Xafiiska Puntland 0
Afhayeenka Ciidanka Meleteriga Somaliland Cabdiraxmaan Cabdillaahi Xasan Cabdidheere oo shir jaraa’id kuqabtay magaalada Hargaysa ayaa ka hadlay dagaal maalintii shalay ka dhacay Gobolka Sool. Dagaalkaan oo ka dhacay deegaan Laascaanood ujira masaafo dhan 28KM ayaa